Eyona midlalo mihle yabadala | Amadoda aQinisekileyo
IsiJamani sasePortillo | | Ukuzonwabisa
Sonke siyaluphala kungekudala okanye kamva oko akuthethi ukuba kuya kufuneka siphulukene nobungqabavu kunye nomnqweno wokuzonwabisa. Kubalulekile ukuba abantu abadala baqhubeke nokonwabela usuku ngalunye ukonyusa impilo yabo kunye nokuthintela izifo. Le misebenzi kufuneka ibe nemveliso kwaye kuya kufuneka uyigcine isebenza ngokwasemzimbeni nasengqondweni. Kungenxa yoko le nto siza kunikezela eli nqaku ukuba sazi eyona ibalaseleyo imidlalo yabantu abadala.
Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngesi sihloko, le yiposti yakho.
1 Imisebenzi ecetyiswayo yabantu abadala
2 Eyona midlalo ilungele abantu abadala
2.1 Imidlalo yebhodi
2.2 He ndiyabona ndiyabona
2.3 Inuka njani?
2.4 Imidlalo yememori enamakhadi
2.5 USimon uthi
2.6 Chonga igama kunye nengoma
2.7 Amagama atyunjiweyo
2.8 Iiphazili zentetho
2.9 Intsiba nganye iyahlangana
2.10 Qikelela ukuba yintoni
Imisebenzi ecetyiswayo yabantu abadala
Kucacile ukuba abantu abadala abanakwenza izinto zomzimba ezifanayo nezabantu abancinci. Kufuneka ithathelwe ingqalelo ukuba ukusikelwa umda kukhulu kunye namandla emoto nganye nganye. Ke ngoko, kuyimfuneko ukudlala imidlalo yabantu abadala abalungelelaniswe nokusikelwa umda kunye namandla abo. Le midlalo iyimfuneko kuwo onke amabakala obomi kodwa banconyelwa kakhulu kubantu abadala ukuba banikwe izibonelelo zabo ezintle.
Phakathi kwezibonelelo esinazo zemidlalo yabantu abadala sinakho oku kulandelayo:
Ngumthombo wolonwabo kunye nokonwaba
Ukuphucula ukuzithemba kunye nokuzithemba
Iphucula amandla omzimba
Umzimba kunye nengqondo esebenzayo kuthatha ixesha elide ukonakala ngenxa yokwaluphala. Konke oku sikongeza ukondla okufanelekileyo siya kuba sinika izitshixo eziyimfuneko ukuze sibenempilo ixesha elide.
Emva koko siza kwenza uluhlu lweyona midlalo ilungele abantu abadala kunye nenkcazo emfutshane nganye nganye.
Eyona midlalo ilungele abantu abadala
Imidlalo yebhodi yakudala yokuphila ekhuthaza intlalontle phakathi kwabantu abadala kwaye uninzi lwayo lukhuthaza ubuchule kunye nobuchule bokuyila. Le midlalo yile Iidomino, amakhadi, ibhingo okanye iludo. Ukongeza, banokufumana izibonelelo ezithile njengokuqina kwengqondo kunye nokuthatha inxaxheba kwezentlalo.
He ndiyabona ndiyabona
Iklasikhi ukusuka kwelona lincinci. Kulo mdlalo, elinye lamalungu eqela likhetha into eneleta ethile yokuqala. Abanye abathathi-nxaxheba kufuneka bathethe izinto ezinokubakho. Umntu okhetha into unokunika imikhondo okanye azise malunga nokuba kuphi egumbini. Lowo uqashisayo unokuba nohlobo oluthile lwebhaso elikhethekileyo ukuze anikezele ukhuphiswano ngakumbi kunye nobomi emlilweni.
Olu lolunye uhlobo lomdlalo olunokunika ukuhleka okuninzi kubathathi-nxaxheba. Imalunga nokubeka uthotho lwezinto nezinto kwizikhongozeli ezahlukeneyo. Umntu ngamnye kufuneka akhethe ibe nye yokugqibela yamehlo kwaye kufuneka amisele into ngevumba elikhuphayo. Umda wezixhobo zezinto usetelwe kukucinga kwethu ukuze sikwazi ukukhetha amawaka ezenzo. Umntu onokuqonda ezona ntlobo zininzi zamavumba ukuze afumane amanqaku kwiqela lakhe.
Imidlalo yememori enamakhadi
Awunakho ukudlala amakhadi kuphela ngokuzonwabisa kodwa ngenjongo yokugcina imemori. Imiqolo emi-4 kunye neekholamu ezili-13 zinokwakheka ngomgangatho wamakhadi ajonge ezantsi. Umdlali kufuneka athathe amabini kulawo makhadi kumgangatho omde ngokungacwangciswanga. Kuya kujongwa ukuba amanani ekhadi ahlukile. Ukuba kunjalo, la makhadi azakushiyeka ejonge phantsi kwakhona kwaye iyakuba kukujika komnye umdlali. Injongo yomdlalo kukufumana elona nani liphezulu lamakhadi kwaye ubone ukuba ngubani ophumeleleyo.
Olu hlobo lomdlalo ludlalwa ngabantu abathathu okanye nangaphezulu. Omnye wabathathi-nxaxheba ugama linguSimon. Lo mntu nguye okhokela isenzo. Abanye abathathi-nxaxheba mabenze le nto ithethwa nguSimon. Ubuqhetseba kwigama lomlingo "uSimon uthi." Ukuba uSimon uthi "uSimon uthi tsiba," kufuneka abadlali bamthobele. Ngokuchasene noko, ukuba athi kuphela igama "tsiba" kufuneka bangamhoyi okanye baya kususwa.
Chonga igama kunye nengoma
Ukwenza iinkumbulo kwimemori kukho imidlalo yabantu abadala abanezona ngoma zimanyelweyo ngamaxesha abo. Ungayithatha ingoma ngokungahleliwe okwexeshana. Siza kubeka malunga neengoma ezili-10 xa zizonke kwaye abathathi-nxaxheba kufuneka babhale phantsi igama lale ngoma ephepheni. Ophumeleleyo uya kuba ngoyena ucule kakhulu ngengoma nganye.
Omnye wemidlalo yeklasikhi ngalo lonke ixesha. Inamagama okudityaniswa ngohlobo lokuba isilayidi sokugqibela segama libe sisiqalo selandelayo. Lo msebenzi unokwenziwa kumaqela amancinci okanye ngokwamanqanaba aliqela ukwenza ukhuphiswano phakathi kwamaqela.
Kuyaziwa ukuba abantu abadala babulawule ubomi babo bonke ngeqhalo laseSpain. Ukuba sikwiqela labantu sinokukhetha ezona ntetho zaziwayo kwaye sizilungelelanise etafileni. Injongo kukuzimanya kunye nokwenza intetho epheleleyo. Iqela elenza ngokukhawuleza liya kufumana amanqaku kwaye lifumane umvuzo.
Intsiba nganye iyahlangana
Lo mdlalo ulula kodwa uyonwabisa ngexesha elifanayo. Izinto ezahlukeneyo zibekwe etafileni. Ezi zinto kufuneka zibe ziindidi ezahlukeneyo. Ngale ndlela, umntu othabatha inxaxheba kufuneka adwelise izinto ezikudidi olunye. Ezi zinto zinokuba ngumzekelo: amaqhosha, ukutya okuziinkozo, iimabhile, ukubhala izinto, iimbotyi, njl.
Qikelela ukuba yintoni
Lo mdlalo wenza abathathi-nxaxheba bahleke kakhulu. Kukuqhuma okwenzeka ngokwamaqela. Into ayiphikayo efunekayo yingxowa engavumeli ukubona okungaphakathi. Siza kwazisa into ngaphakathi ekufuneka ichazwe ngumntu osele ekhulile. Umntu akakwazi ukujonga nje ngokusebenzisa umnxeba. Elinye iqela kufuneka liqashele ukuba yeyiphi into okanye ingaphakathi engxoweni.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi ngeyona midlalo mihle yabadala. Ungalibali ukuba abantu abadala kufuneka basebenze ngalo lonke ixesha kwaye baqhubeke nokunxibelelana.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » yokuPhila » Ukuzonwabisa » Imidlalo yabantu abadala
Ungayilungisa njani imarathon yesiqingatha